တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Kong Xuanyou ဦးဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဇန်နဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၈
နေပြည်တော်၊ ဇန်န၀ါရီ – ၁၇
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Mr. Kong Xuanyou ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Kong Xuanyou တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဒုတိယညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး Maj. Gen. Shao Yuanming ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang ၊ စစ်သံမှူး Sr. Col. Xioang Shaowei နှင့်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ-တရုတ်နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ဦးဆောင်သည့် ၂+၂ အဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့မှုရလဒ်များနှင့် ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့်အခြေအနေများ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် တပ်မတော်မှဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တရုတ်နိုင်ငံမှကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုပြဿနာများအား မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် တပ်မတော်မှဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အပေါ် တရုတ်နိုင်ငံမှထောက်ခံရပ်တည်မှုအခြေအနေများ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ချစ်ကြည်ရေးခရီးများရောက်ရှိစဉ် တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတ မစ္စတာရှီကျင့်ဖျင် အပါအ၀င်တရုတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံချိန်၌ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မှုအခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ဒုတိယ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူးတို့နှင့် အမှတ်တရလက်ဆောင် ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
နပွေညျတျော၊ ဇနျနဝါရီ – ၁၇
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တရုတျနိုငျငံ၊ ဒုတိယနိုငျငံခွားရေး ၀နျကွီး Mr. Kong Xuanyou ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ယနညေ့နပေိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ဒုတိယ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျးနှငျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားတကျရောကျကွပွီး တရုတျနိုငျငံ၊ ဒုတိယနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Mr. Kong Xuanyou တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ ဗဟိုစဈကျောမရှငျ ဒုတိယညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး Maj. Gen. Shao Yuanming ၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာတရုတျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Hong Liang ၊ စဈသံမှူး Sr. Col. Xioang Shaowei နှငျ့တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာ-တရုတျနှဈနိုငျငံနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနနှငျ့ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာနတို့ ဦးဆောငျသညျ့ ၂+၂ အဆငျ့မွငျ့ဆှေးနှေးပှဲကငျြးပပွုလုပျခဲ့မှုရလဒျမြားနှငျ့ ဆကျလကျအကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျမညျ့အခွအေနမြေား၊ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျအတှကျ တပျမတျောမှဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေားနှငျ့ နှဈနိုငျငံနယျစပျဒသေတညျငွိမျအေးခမျြးရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ပွညျတှငျး ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျမြားတှငျ တရုတျနိုငျငံမှကူညီဆောငျရှကျပေးမှုအခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး ဖွဈပှားခဲ့သညျ့ အကွမျးဖကျမှုပွဿနာမြားအား မွနျမာနိုငျငံအစိုးရနှငျ့ တပျမတျောမှဖွရှေငျးဆောငျရှကျခဲ့မှုအပျေါ တရုတျနိုငျငံမှထောကျခံရပျတညျမှုအခွအေနမြေား၊ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ တရုတျနိုငျငံသို့ခဈြကွညျရေးခရီးမြားရောကျရှိစဉျ တရုတျနိုငျငံသမ်မတ မစ်စတာရှီကငျြ့ဖငျြ အပါအဝငျတရုတျနိုငျငံခေါငျးဆောငျမြား၊ တပျမတျောခေါငျးဆောငျမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ခြိနျ၌ နှဈနိုငျငံခဈြကွညျ ရငျးနှီးမှုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျနိုငျရေးအတှကျ ဆှေးနှေးဆောငျရှကျနိုငျခဲ့မှုအခွအေနမြေားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြး ဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျသညျ တရုတျနိုငျငံ၊ ဒုတိယနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး၊ တရုတျ ကှနျမွူနဈပါတီဗဟိုစဈကျောမရှငျဒုတိယ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူးတို့နှငျ့ အမှတျတရလကျဆောငျ ပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျ ပေးအပျကွပွီး တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူစုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။